करिश्माले भेटिन् केपी ओली, एमाले प्रवेश गर्न लागेकी हुन् ? – Sandesh Press
करिश्माले भेटिन् केपी ओली, एमाले प्रवेश गर्न लागेकी हुन् ?
October 21, 2021 130
काठमाडौ । नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने संकेत गरेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेकी छन् । उनी आफै त्यसवारे जानकारी गराएकी थिइन् । केही दिन यता करिश्मा र ओलीबीच कुराकानी भइरहेको पनि खुलेको छ । करिश्माले फेसवुकमा ओलीको फोन आएको जानकारी दिएकी थिइन् । अब छिटै भेट्नेछु भनेर फेसवुकमा उल्लेख गरेकी करिश्माले ओलीलाई बालकोट पुगेर भेटेकी हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भेटेको जानकारी गराएकी हुन् । तस्बिरसहित स्टाटस् लेख्दै अभिनेत्री मानन्धरले अध्यक्ष ओलीको विचार सुन्दा आनन्द लागेको बताएकी छन् । अध्यक्ष ओलीसँग मानन्धरसहित गायीकासमेत रहेकी राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वली र हास्य कलाकार जितु नेपाल पनि थिए । केही साता अघि मानन्धरले ओलीले आफूलाई फोन गरेको भन्दै स्टाटस् लेखेकी थिइन् ।
उनी केही समयअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फोन गरेको भनेर चर्चामा आएकी थिइन् । उनको सो कुराले विवादित पनि बनेकी थिइन् । मोवाइलको स्कृन राख्दा उनको मोवाइलमा फोन आएको नभई फोन गरेको (आउट गोइङ) को संकेत देखिएपछि विवादित बनेकी थिइन् ।
तर अहिले भने उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमालेमा प्रवेश गर्ने संकेत गरेकी छन्। मंगलबार दिउँसो फेसबुकमा उनले केपी शर्मा ओलीसमेतको नाम देखिने मोबाइल कलको स्क्रिनसट सेयर गर्दै लगत्तै ‘उहाँलाई अवश्य भेट्नेछु’ भनेकी हुन्। उनले लेखेको स्टाटसमा थुप्रै कमेन्ट आएका छन् । कतिपयले उनलाई एमाले प्रवेश गर्न लागेको संकेतका रुपमा बुझेका छन् ।
एकपटक उनले केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फोन गरेको भनेर यस्तै स्क्रिनसट राख्दा ‘इनकमिङ’ होइन, ‘आउटगोइङ’ देखिएपछि फेसबुक प्रयोगकर्ताले कमेन्टमा उल्लीबिल्ली पारेका थिए। उनले लगातार केही दिन यता ओलीसंग सम्बन्धीत स्टटास राखेको देखिन्छ । एउटा स्टाटस (बा यत्तिकै भएको होइन रहेछ) र स्क्रिनसटलगत्तै करिश्मा मानन्धरले अर्को स्टाटस लेखेकी छन्, ‘कोही राजनीतिक व्यक्तित्वले कुनै क्षेत्रका व्यक्तिलाई सराहना गर्नु राम्रो संस्कार हो।यो हाँस्ने कुरा होइन। वहाँलाई अवश्य भेट्नेछु।’
Prevप्रेमीकासँग होटल गएका सलमानको मृत्यु, कारण खुल्दा प्रहरी नै झस्कियो……
Nextजब पहिलो पटक आर्यनलाई भेट्न जेल पुगे शाहरुख खान, १८ मिनेट के गरे कुराकानी ?
आफैं औषधि किनेर खाँदा ठुलो क्षति, टाइफाइड ज्वरो भन्दै औषधि खाएपछि …
पल शाह घटना : शर्मिला वाइवा सहित किशोरी वारे नानाथरी बोल्ने र लेख्ने आधा दर्जन युट्युवर पक्राउ